पुनर्जन्मको चमत्कार, विश्वव्यापी चर्च अफ भगवान स्विजरल्याण्ड (WKG)
हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं। यो तपाईंको र मेरो गन्तव्य हो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित परिवर्तन अनुभव गर्न - एक आध्यात्मिक। भगवानले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो ताकि हामी उहाँको ईश्वरीय प्रकृतिमा बाँड्न सकौं। नयाँ नियमले यो ईश्वरीय प्रकृतिलाई एक solverको रूपमा बोल्दछ जुन मानव पापीपनको मैला धुन्छ। र हामी सबैलाई यो आध्यात्मिक शुद्धिकरण चाहिन्छ किनकि पापले सबैबाट शुद्धता लिएको छ। हामी सबै समान चित्रकलाहरू हौं जुन सयौं वर्षसम्म उनीहरूमा फोहर छ। जसरी मास्टरपिसलाई मल्टिलेयर गरिएको फोहोरले क्लाउड गरेको छ, त्यसरी नै हाम्रो पापीपनको अवशेषहरूले सर्वशक्तिमान मास्टर कलाकारको मौलिक आशयलाई क्लाउड गरेको छ।
कलाकृति को बहाली
फोहोर पेंटिंगको सादृश्यले हामीलाई आध्यात्मिक शुद्धीकरण र पुनर्जन्म किन चाहिन्छ भनेर राम्रोसँग बुझ्नुपर्दछ। हामीसँग रोमको भ्याटिकनको सिस्टिन चैपलको छतमा माइकलएन्जेलोको दर्शनीय चित्रहरूका साथ क्षतिग्रस्त कलाको प्रसिद्ध प्रख्यात केस छ। माइकल एन्जेलो (१–––-१–1475।) सिस्टिन चैपलको कलात्मक डिजाइनको साथ १ 1564०1508 मा 33 560 वर्षको उमेरमा सुरु भयो। चार बर्ष भन्दा बढी मा, उनले लगभग m2० mXNUMX छतमा बाइबल दृश्यहरु सहित असंख्य चित्रहरु सिर्जना गरे। मोशाको पुस्तकका दृश्यहरू छतका चित्रहरूको मुनि भेट्न सकिन्छ। एक प्रख्यात मोटिफ माइकल एन्जेलोको एन्थ्रोपोमोर्फिक हो भगवानको प्रतिनिधित्व (मानिसको छविमा नमूना गरिएको): पहिलो मानिस आदम, परमेश्वरको हात र औंलाहरू सम्म फैलिएको पाखुरा। शताब्दियौंदेखि, छत फ्रेस्को थियो (फ्रेस्को भनिन्छ किनभने कलाकारले ताजा प्लास्टरमा चित्रित गरेको) क्षति भयो र अन्तमा फोहोरको लेयरले ढाकिएको थियो। समयमा यो पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने थियो। यसको रोकथाम गर्न, भ्याटिकनले सफाइ र विशेषज्ञहरूलाई पुनःस्थापना सुम्पियो। चित्रहरूमा अधिकांश काम १ 80 s० को दशकमा सम्पन्न भयो। समयले मास्टरपिसमा आफ्नो छाप छोडेको थियो। शताब्दीयौंको दौडान धूलो र कालिने चित्रकलामा गम्भीर क्षति पुगेको थियो। सिस्टिन चैपलको चुहावटदार छानामा पनि ओसिलो - वर्षा पस्केको थियो - विनाशले बर्बाद गर्यो र कलाको कामलाई कडा रूपमा बेवास्ता गर्यो। विरोधाभासपूर्ण रूपमा, यद्यपि, सायद शताब्दीयौंको दौडान पेंटि preहरू जोगाउने प्रयासहरू नै सबैभन्दा खराब समस्या हुन सक्छ। फ्रेस्कोलाई यसको गाढा सतहलाई हल्का पार्नको लागि पशु गोंद वार्निशसँग लेपित गरिएको थियो। छोटो अवधि को सफलता को लागी समाधान गर्न को लागी कमी को एक विस्तार भयो। वार्निशका विभिन्न तहहरूको क्षयले छत चित्रको क्लाउडिंगलाई अझ स्पष्ट बनायो। गमले पेंटि ofको सतहलाई सink्यो र तान्यो। केही स्थानहरूमा ग्लुको बन्द भयो, र .्ग कणहरू पनि ढिलो भयो। त्यस पछि चित्रकारको जीर्णोद्धार गर्ने जिम्मा विशेषज्ञहरूले आफ्नो काममा अत्यन्तै होशियार थिए। तिनीहरूले जेल फर्ममा हल्का घोलकहरू लागू गरे। र स्पन्जेसनहरू प्रयोग गरेर जेललाई बिस्तारै हटाउँदा, कालो-कालो बोट फ्लोरसेन्स पनि हटाइयो।
यो एक चमत्कार जस्तै थियो। बादल, अँध्यारो फ्रेस्को फेरि जीवनमा आयो। माइकलएन्जेलो द्वारा निर्मित प्रतिनिधित्व ताजा गरिएको थियो। तिनीहरूबाट विकिरण र जीवन फेरि। यसको पहिलेको कालो अवस्थाको तुलनामा, सफा गरिएको फ्रेस्को नयाँ सिर्जना जस्तो देखिन्थ्यो।
भगवानको उत्कृष्ट कृति
माइकल एन्जेलोले बनाएको छत चित्रको पुनर्स्थापना, परमेश्वरद्वारा गरिएको पापबाट मानव पापको आत्मिक शुद्धिकरणको लागि उपयुक्त रूप हो।मस्टर, सृष्टिकर्ता, हामीलाई आफ्नो कलाको सबैभन्दा बहुमूल्य कामको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो। मानवता उहाँकै स्वरूपमा सिर्जना गरिएको थियो र पवित्र आत्माले ग्रहण गर्नुपर्छ। दुःखको कुरा, हाम्रो पापीपनले गर्दा उहाँको सृष्टिको अपवित्रताले यस शुद्धतालाई हटाएको छ। आदम र हव्वाले पाप गरे र यस संसारको आत्मा पाए। हामी पनि आध्यात्मिक तवरमा भ्रष्ट छौं र पापको फोहोरले दाग छौं। किन? किनकि सबै व्यक्तिहरू पापी छन् र उनीहरूको जीवन परमेश्वरको इच्छाको बिरूद्ध बाँचिरहेका छन्।
तर हाम्रो स्वर्गमा हुनुहुने पिताले हामीलाई आत्मिकरुपमा नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ, र येशू ख्रीष्टको जीवन हामी सबैले देख्ने ज्योतिबाट झल्किन्छ। प्रश्न यो छ: के हामी वास्तवमै हामीसँग परमेश्वर हामीबाट के गर्न चाहन्छौं भन्ने चाहन्छौं? अधिकांश व्यक्तिहरू यसलाई चाहँदैनन्। तिनीहरू अझै पनि अन्धकारमा पापको कुरूप दागले आफ्नो जीवन जिउँदै छन्। एफिससका मसीहीहरूलाई लेखेको पत्रमा प्रेरित पावलले यस संसारको आध्यात्मिक अन्धकारबारे वर्णन गरे। उनले उनको विगतको जीवनको बारेमा भने: "तपाईं पनि आफ्नो अपराध र पापहरूको कारण मर्नुभयो जुन तपाईं यस संसारमा रहनुहुन्थ्यो" (एफिसी २: १-2,1-१-2)
हामीले पनि यस भ्रष्ट शक्तिलाई हाम्रो प्रकृति बिगार्न अनुमति दियौं। र रूसले माइकलएन्जेलोको फ्रेस्कोलाई छोपेको र हाम्रो शरीर पनि अन्धकार हुँदै गयो। त्यसकारण यो अत्यन्त जरुरी छ कि हामी परमेश्वरको प्रकृतिलाई ठाउँ दिन्छौं। उसले हामीलाई नुहाउन, पापको मैला हटाउन र आत्मिक रूपमा नविकरण र चमक दिन सक्छ।
नवीकरण को छविहरु
नयाँ नियमले हामी कसरी आत्मिकरुपमा पुन: सृजना गर्न सकिन्छ भनेर वर्णन गर्दछ। यो चमत्कार स्पष्ट बनाउन को लागी धेरै उपयुक्त analogies दिन्छ। जस्तो कि माइकल एन्जेलोको फ्रेस्कोलाई फोहोरबाट जोगाउनु आवश्यक पर्‍यो, त्यसरी नै हामीले आध्यात्मिक रूपमा नुहाउनु पर्छ। र यो गर्न सक्ने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ हामीलाई हाम्रो पापी स्वभावका दूषित चीजहरूबाट धुनुहुन्छ।
अथवा यसलाई पावलका शब्दहरूमा लेख्नुपर्दछ, जुन शताब्दीयौंदेखि इसाईहरूलाई सम्बोधन गरिएको थियो: "तर तिमी शुद्ध भइसकेका छौ, तिमी पवित्र पारिएका छौ, प्रभु येशू ख्रीष्टको नामद्वारा धर्मी ठहरिएका छौ" (१ कोर .1.११) यो शुद्धीकरण मोचनको कार्य हो र यसलाई "पवित्र आत्मामा पुनर्जन्म र नवीकरण" भनिन्छ (तीतस १,।)। यो हटाउने, सफा गर्ने वा पापको उन्मूलन गर्ने खतनाको रूपकले पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। इसाईहरूको हृदय खतना भएको छ। हामी भन्न सक्दछौं कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको अनुग्रहमा पापको क्यान्सरबाट मुक्त गर्न शल्यक्रियाद्वारा बचाउनुहुन्छ। पापको छुट्टिनु - आध्यात्मिक खतना - हाम्रो पापको क्षमाको तस्वीर हो। येशूले यो सम्भव गर्नुभयो आफ्नो मृत्युद्वारा सम्पूर्ण प्रायश्चितको रूपमा। पावलले लेखे: "अनि उसले तिमीसँग उसलाई जीवित तुल्यायो, जो तिमी पापहरू र आफ्नो शरीरको खतनामा मरेका थियौ र हामीलाई सबै पापहरू क्षमा गर्यौ"। (कलस्सी १:१:2,13)।
नयाँ नियमले क्रूसको प्रतीकको प्रयोग गरी यो देखाउँदछ कि कसरी हाम्रो पापीलाई हाम्रो प्राण मार्न सबै शक्तिबाट वञ्चित गरियो। पावलले लेखे: "हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो बुढो मानिस उहाँसँगै [क्रिष्ट] क्रूसमा टाँगिएको थियो, ताकि पापको शरीरलाई नाश गर्न सकियोस् र हामी अब पापको सेवा गर्दैनौं"। (रोमी :6,6:११)। जब हामी ख्रीष्टमा हुन्छौं, पाप हामीमा हुन्छ (अर्थात् हाम्रो पापी स्वयं) क्रूसमा टाँगियो, वा यो मर्दछ। निस्सन्देह, सांसारिक अझै पनि हाम्रो आत्मालाई पापको फोहोर पोशाकले ढाक्न खोजिरहेको छ। तर पवित्र आत्माले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ र पापको आकर्षणको प्रतिरोध गर्न सक्षम तुल्याउनुहुन्छ। पवित्र आत्माको कार्यद्वारा हामीलाई परमेश्वरको अस्तित्वले भर्नुहुने ख्रीष्टद्वारा हामी पापको सर्वोच्चताबाट स्वतन्त्र भयौं।
प्रेरित पावलले अन्त्येष्टिको रूपक प्रयोग गरेर परमेश्वरले गर्नुभएका यो कार्यको बयान गर्दछ। अन्त्येष्टि अन्त्येष्टि प्रतीकात्मक पुनरुत्थान, जो पापी "बुढो मानिस" को ठाउँमा भर्खरै जन्मिएको "नयाँ मानिस" को रूपमा खडा छ। ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जसले हाम्रो नयाँ जीवनलाई सम्भव तुल्याउनुभयो, जसले हामीलाई निरन्तर क्षमा दिनुहुन्छ र जीवनदायी बल दिनुहुन्छ। नयाँ नियमले हाम्रो पुरानो आत्मको मृत्यु र हाम्रो पुनर्स्थापना र प्रतीकात्मक पुनरुत्थानलाई नयाँ जन्मसँग पुनर्जन्मसँग तुलना गर्दछ। हाम्रो रूपान्तरणको क्षणमा हामी आध्यात्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेका छौं। हामी पवित्र आत्माद्वारा नयाँ गरी जन्मेका छौं र फेरि जीवनमा ल्याउँदछौं।
पावलले इसाईहरूलाई थाहा दिए कि "परमेश्वरले उहाँको महान कृपापछि, हामीलाई येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा जीवित आशाको लागि पुनर्जीवित पार्नुभयो" (१ पत्रुस १,1) ध्यान दिनुहोस् कि क्रिया "पुनर्जन्म" उत्तम छ। यो तथ्य यो अभिव्यक्ति हो कि यो परिवर्तन हाम्रो इसाई जीवनको सुरूमा भएको थियो। जब हामी परिवर्तित हुन्छौं, परमेश्वर हामीमा बास गर्नुहुन्छ। र यसको साथ हामी पुनः सिर्जना हुनेछौं। यो येशू, पवित्र आत्मा र हामीमा बास गर्ने पिता हुनुहुन्छ (यूहन्ना .14,15..23-) जब हामी - आध्यात्मिक रूपमा नयाँ व्यक्तिहरू - रूपान्तरित हुन्छन् वा नयाँ जन्म हुन्छन्, परमेश्वर हाम्रो घरमा सर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वर पिताले हामीमा काम गर्नुहुन्छ भने पुत्र र पवित्र आत्मा पनि एकै साथ हुनुहुन्छ। भगवान्‌ले हामीलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, हामीलाई पापहरूबाट शुद्ध पार्नुहुन्छ र परिवर्तन गर्नुहुन्छ। र यो bestowal हामीलाई रूपान्तरण र पुनर्जन्म मार्फत दिइएको छ।
इसाईहरू कसरी विश्वासमा बढ्छन्
अवश्य पनि, नयाँ गरी जन्मेका इसाईहरू हुन् - यसलाई पत्रुसको शब्दहरूमा राख्नु - "नवजात बच्चाहरू जस्तै"। तिनीहरू "समझदार, चर्को दूधको लागि उत्सुक" हुनु पर्छ जसले तिनीहरूलाई खुवाउँदछ ताकि तिनीहरू विश्वासमा पक्राउन सकून् (१ पत्रुस १,1) पत्रुस भन्छन् कि नयाँ गरी जन्मेका इसाईहरूले समयको साथ अन्तर्दृष्टि र आध्यात्मिक परिपक्वता प्राप्त गर्दछन्। तिनीहरू "हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र ज्ञानमा" बढ्छन्। (१ पत्रुस १,2) बाइबलको विस्तृत ज्ञानले हामीलाई अझ राम्रो इसाई बनाउँछ भनेर पावलले भनेको होइन। बरु यसले हाम्रो आध्यात्मिक चेतनालाई अझ तिखार्ने आवश्यकतालाई दर्साउँछ ताकि हामी ख्रीष्टलाई पछ्याउनुको अर्थ के हो भनेर बुझ्न सकौं। बाइबलीय अर्थमा "ज्ञान" मा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन सामिल छ। यो विनियोग र व्यक्तिगत अनुभूति संग मिलेर जान्छ कि हामीलाई ख्रीष्ट जस्तै बढी बनाउँछ के। इसाई विश्वासको बृद्धि मानव चरित्र गठनको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। न त यो हामी येशूमा बाँचिरहेको पवित्र आत्माको आध्यात्मिक वृद्धिको परिणाम हो। बरु हामीभित्र पवित्र आत्माको कामले भरिएको हुन्छ। परमेश्वरको स्वभाव अनुग्रहबाट आउँछ।
हामी दुई तरिकामा औचित्य प्राप्त गर्दछौं। एकातिर, हामी धर्मी ठहरिन्छौं वा हामीले हाम्रो भाग्यको अनुभव गर्छौं जब हामीले पवित्र आत्मा पाउँछौं। यस दृष्टिकोणबाट औचित्य एक पटक झर्ने क्रममा हुन्छ र ख्रीष्टको प्रायश्चितद्वारा सम्भव भएको छ। जे होस्, हामीसँगै ख्रीष्ट हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ र हामीलाई परमेश्वरको आराधना गर्न र उहाँको सेवकाईमा सेवा दिनको निम्ति तयार पार्नुहुन्छ भनेर हामी औचित्य पनि अनुभव गर्दछौं। जब येशू हामीलाई घरमा लानुहुन्छ हामी रूपान्तरित भएपछि परमेश्वरको सार वा "चरित्र" हामीलाई पहिले नै दिइएको छ। जब हामी पश्चात्ताप गर्छौं र येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौं तब हामी पवित्र आत्माको सुदृढ उपस्थिति पाउँछौं। हाम्रो इसाई जीवनको क्रममा परिवर्तन भइरहेको छ। हामी पवित्र आत्माको ज्ञान र सुदृढीकरण गर्ने शक्तिमा अझ बढी अधीन हुन सिक्छौं जुन हामीमा पहिलेदेखि नै रहेको छ।
भगवान हामीमा हुनुहुन्छ
जब हामी आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेका हुन्छौं, ख्रीष्ट पवित्र आत्माबाट हामीभित्र पूर्ण रूपमा बस्नुहुन्छ। कृपया यसको मतलबको बारेमा सोच्नुहोस्। पवित्र आत्मा मार्फत उनीहरूमा बास गरेको ख्रीष्टको कार्यबाट मानिसहरूले परिवर्तन अनुभव गर्न सक्दछन्। परमेश्वर हामीसँग ईश्वरीय प्रकृति बाँडिदिनुहुन्छ। यसको मतलब एक इसाई पूर्ण रूपमा नयाँ व्यक्ति भएको छ।
यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ नयाँ सृष्टि हो; पुरानो बितेको छ, हेर्नुहोस्, नयाँ भएको छ, "२ कोरिन्थी 2:१:5,17 मा पावलले भन्छन्।
आध्यात्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेका इसाईहरूले नयाँ छवि लिन्छन् - जुन हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईंको जीवन यो नयाँ आध्यात्मिक वास्तविकता को दर्पण हुनु पर्छ। त्यसकारण पावलले उनीहरूलाई यो निर्देशन दिन सक्षम भए: "अनि यस संसारको साथ आफूलाई बराबर नबनाओ, तर आफुलाई नयाँ बनाएर आफूलाई बदल्नुहोस् ..." (रोमी :12,2:११)। यद्यपि हामीले यो सोच्नु हुँदैन कि इसाईहरूले पाप गर्दैनन्। हो, हामी पवित्र आत्मा प्राप्त गरेर हामी नयाँ गरी जन्मेका छौं भन्ने अर्थमा हामी एक क्षणबाट अर्को क्षणमा परिवर्तन भएका छौं। जे होस्, केहि "बुढो मानिस" अझै त्यहाँ छ। इसाईहरूले गल्ती र पाप गर्छन्। तर तिनीहरू आनीबानीमा पापमा डुब्दैनन्। तिनीहरूलाई निरन्तर क्षमा दिइरहनु पर्छ र उनीहरूको पापबाट धुनु पर्दछ। आध्यात्मिक नवीकरणलाई एक इसाई जीवनको क्रममा निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ।
एक इसाईको जीवन
यदि हामी परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउँछौं भने, हामी ख्रीष्टलाई पछ्याउन सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ। हामी दिनहुँ पाप त्याग्न र तपस्यामा परमेश्वरको इच्छाको अधीनमा बस्न तयार हुनुपर्दछ। र जब हामी यो गरिरहेका हुन्छौं, ख्रीष्टको बलिदानको रगतले गर्दा, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा पापहरूबाट निरन्तर धुनुहुन्छ। हामीहरू क्रिष्टको रगतको पोशाकले आत्मिक रूपमा सफा भएका छौं जुन उहाँको प्रायश्चितको लागि हो। परमेश्वरको अनुग्रहले हामी आत्मिक पवित्रतामा बस्न सक्छौं। र हाम्रो जीवनमा यो गरेर, ख्रीष्टको जीवन हामीले निकाल्ने ज्योतिमा झल्किन्छ।
एउटा प्राविधिक चमत्कारले माइकलएन्जेलोको सुस्त र बिग्रिएको चित्रलाई रूपान्तरण गर्‍यो। तर भगवान्‌ले हामीमाथि अझ अद्भुत आध्यात्मिक आश्चर्यकर्म गर्दै हुनुहुन्छ। यसले हाम्रो दाग अध्यात्मिक अस्तित्वलाई पुनर्स्थापित गर्नु भन्दा धेरै गर्छ। उहाँ हामीलाई नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। आदमले पाप गरे, ख्रीष्टले क्षमा गर्नुभयो। बाइबलले आदमलाई पहिलो मानिस भनेर चिनाउँछ। र नयाँ नियमले देखाउँदछ कि हामीलाई आदमजस्तै जीवन दिइएको छ जुन अर्थमा हामी मर्छी र शारीरिक छौं उहाँ पृथ्वीमा जस्तो हुनुहुन्छ। (१ कोर १.1..15,45-49)
तर उत्पत्ति १ मा भनिएको छ कि आदम र हवालाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको थियो। तपाईलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको हो भनेर जान्नुले इसाईहरुलाई यो बुझन मद्दत गर्दछ कि तिनीहरु येशू ख्रीष्टद्वारा मुक्ति पाएका छन्। वास्तवमा परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएपछि, आदम र हव्वाले पाप गरे र पापको दोष लगाए। प्रथम सृष्टि गरिएका व्यक्तिहरू पापीको लागि दोषी थिए र यसको नतिजा आध्यात्मिक तवरमा कलंकित संसार थियो। पापले हामीलाई प्रदुषित गरी अशुद्ध बनाएको छ। तथापि, शुभ समाचार यो हो कि हामी सबैलाई क्षमा र आत्मिक रीतिरिष्ट गर्न सकिन्छ।
हाम्रो पापको मोल तिर्ने येशू ख्रीष्टले शरीरमा आफ्नो उद्धार कार्यमार्फत हामीलाई बचाउनुहुन्छ: मृत्यु। येशूको बलिदानरूपी मृत्युले हामीलाई स्वर्गमा बस्नुहुने हाम्रो पितासँग मेलमिलाप गराउँछ र मानव पापको कारण सृष्टिकर्तालाई उहाँको सृष्टिबाट कसरी अलग गर्नुभयो भन्ने कुराको छुटकारा दिएर। हाम्रो प्रधान पुजारीको हैसियतमा येशू ख्रीष्टले जन्मजात पवित्र आत्माबाट हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। येशूको प्रायश्‍चितले पापको बाधा तोड्दछ जसले मानव र परमेश्वर बीचको सम्बन्धलाई भ .्ग गर्दछ। तर त्यसबाहेक, पवित्र आत्माको माध्यमबाट ख्रीष्टले गर्नुभएको कामले हामीलाई परमेश्वरसँग एकतामा बाँधेर हामीलाई खुशी पार्दछ। पावलले लेखे: "किनकि यदि हामी अझै शत्रुहरू भएको बेलामा उनको छोराको मृत्युले परमेश्वरसँग मिलाप गर्यौं भने अब मिलाप गरिसकेपछि उसको जीवनबाट हामी अझ कति धेरै बच्नेछौं" (रोमी :5,10:११)।
प्रेरित पावलले आदमको पापको परिणामलाई ख्रीष्टको क्षमासँग तुलना गरे। सुरुमा आदम र हव्वाले पाप संसारमा आउन दिए। तिनीहरू झूटा प्रतिज्ञाहरूको लागि खडा भए। र यसैले यस संसारमा यसको सबै परिणामहरु संग आए र यो अधिकारमा लिई। आदमको पापपछि परमेश्वरको सजाय आयो भनेर पावलले स्पष्ट पारे। संसार पापमा फस्न लगायो, र सबै मानिसहरु पाप र मृत्युको शिकार भए। यो होइन कि अरुहरू आदमको पापको लागि मरे वा उनले त्यो पाप आफ्नो वंशमा हस्तान्तरण गरे। निस्सन्देह, "शारीरिक" परिणामहरूले भविष्यमा पुस्ताहरूलाई प्रभाव पार्दछ। पाप स्वतन्त्र हुन सक्ने वातावरणको उत्पत्तिको लागि जिम्मेवार आदम पहिलो व्यक्ति थिए। आदमको पापले अर्को मानव कार्यको लागि जग बसाल्यो।
त्यसरी नै, येशूको पापमुक्त जीवन र मानिसजातिको पापको लागि उनको राजीखुसी मृत्युले सबैलाई परमेश्वरसँग आत्मिक रूपमा मिलाप गर्न र उहाँसँग पुनर्मिलन गराउन सम्भव तुल्यायो। "किनकि किनकि यदि एउटा [आदम] को पापको कारण मृत्युले एउटै मार्फत शासन गर्यो भने," अनुग्रहको पूर्णता र न्यायको वरदान पाउनेहरू एक जनाको माध्यमबाट जीवनमा कत्ति धेरै हुन सक्छ, येशू ख्रीष्ट » (पद १ 17) परमेश्वरले पापी मानिसजातिलाई आफूसँग ख्रीष्टमार्फत मिलाप गर्नुभयो। र यसको पछाडि, हामीहरू जो पवित्र आत्मा मार्फत ख्रीष्टद्वारा शक्ति प्राप्त गर्दछौं, आत्मिकरूपमा परमेश्वरको सन्तानको रूपमा परमेश्वरको प्रतिज्ञामा नयाँ गरी जन्मेका छौं।
भविष्यमा धर्मीहरूको पुनरुत्थानबारे कुरा गर्दै येशूले भन्नुभयो कि परमेश्वर “मरेकाहरूको होइन, तर जीवितहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ” (मार्क १: १) तथापि, आफूले बोलेका मानिसहरू जीवित थिएनन्, तर मरेका थिए। God परमेश्वर आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने शक्ति भएकोले, मरेकाहरूको पुनरुत्थान हुनुभएकोले येशू ख्रीष्टले ती जीवितहरूलाई बताउनुभयो। परमेश्वरका सन्तानको रूपमा, हामी ख्रीष्टको पुनरागमनमा पुनरुत्थानको आशा गर्न सक्छौं। अहिले हामीलाई जीवन पनि दिइन्छ, जुन ख्रीष्टमा जीवन हो। प्रेरित पावल हामीलाई प्रोत्साहन दिन्छन्: «... लाग्छ कि तपाईं पापको कारण मर्नुभयो र परमेश्वर ख्रीष्ट येशूमा जिउनुहुन्छ» (रोमी :6,11:११)।